Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Magaalada Xalab iyo Fatxu Shaam oo Weerar Ku Qaaday Maleeshiyaadka Shiicada Ah.
Thursday December 15, 2016 - 08:07:31 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib uga qarxeen magaalada Xalab ee xasuuqa ba'an kala kulmaysa Ruushka iyo maleeshiyaadka shiicada ah.
Shacabka Xalab ayaa Xasuuq daran kala kulmaya Russia
Ciidamo katirsan Jamaacada Jihaadiga Fatxu Shaam ayaa weeraro culus ku qaaday ciidamada Nidaamka Bashaar Al-Asad iyo maleeshiyaadka Rawaafidda iiraan taabacsan.
War rasmi ah oo kasoo baxay Jabhadda Fatxo Shaam ayaa lagu sheegay in weerar naf hurnimo oo uu fuliyay mujaahid jabhadda katirsan uu gaari taangi ah oo walxaha qarxa lagasoo buuxiyay uu ku qarxiyay isku imaatin ay ku sugnaayeen cadawga.
Abul Waliid Al-Misri ayaa waxa kaliya ee uu muslimiinta sunniga ah ku difaaci karay sameeyay isagoona camaliyad istish-haadi ah ku qaaday maleeshiyaadka shiicada ah sida ay xaqiijiyeen ragga firfircoon ee soo tabiya kacdoonka Suuriya.
Waxaa soo baxay warar sheegaya in ay socdaan wadahadallo u dhaxeeya Ruushka iyo xoogaga sunniga ah ee ka dagaallamaya Xalab oo ujeedku yahay in hareereynta laga qaado kumanaan shacab ah taas bedelkeedna ay xabadda joojiyaan.
Meydadka boqolaal qof ayaa waddooyinka Xalab daadsan halka dhaawacyo farabadan ay ku dhax xayiranyihiin magaalada iyadoona xaaladooda caafimaad laga dayrinayo.
Dowladaha Iiraan iyo Ruushka ayaa gabood fallo aan horay loo arag uga geysanaya Xalab, waxaase taasi kasii daran waxa loogu yeero beesha caalamka oo sheedda ka daawanaya gummaadka shacbi ee Xalab kajira iyadoo la ogyahay sida dhinacyadaasi ugu maxaafsan jireen ilaalinta xuquuqul inshaanka!.
Dibad baxyo ballaaran oo lagula tacaadufayo muslimiinta Xalab ayaa ka dhacay magaalooyin waaweyn oo caalamka katirsan, xoogaga islaamiga Suuriya ayaa ku hanjabay in ay xoog ku geli doonaan deegaanada Kafriya iyo Fowcah oo ay deganyihiin shiicada iyo Nuseyriyiinta haddii aan la joojin xasuuqa Xalab.